भीड र जाम बढ्यो, जोगिने कसरी ? « Pahilo News
भीड र जाम बढ्यो, जोगिने कसरी ?
प्रकाशित मिति : 18 June, 2020 7:28 am
काठमाडौं, ४ असार । राजधानीका पहिलाका व्यस्त बजार जानुहोस्– लाग्छ, अहिले देशमा कोरोना महामारी छ र ? जताततै भीडै भीड छ । चोक–चोकमा बन्द गरिएका ट्राफिक लाइट खोलिएका छन् । सवारी जाम शुरु भइसकेको छ । सडकपेटीमा पैदलयात्रुको चाप छ ।
अर्कातिर देशमा कोरोना संक्रमण प्रत्येक दिनजसो बढ्दो गतिमा छ । यससँगै चुनौती थपिएको छ– अब जोगिने कसरी ? संक्रमणको जुन उचाइमा लकडाउन गरिनुपथ्र्यो, खोल्नुपर्ने बाध्यता आयो । जति बेला खोल्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो, पूर्ण लकडाउन गरियो । अर्थात्, जोखिमपूर्ण समयमा बजार खचाखच हुँदै गएका छन् । तर, सर्वसाधारणमा त्यसको कुनै परवाह नभएको आभास हुन्छ ।
इन्द्रचोकका व्यापारी हरि श्रेष्ठ बुधबार ग्राहक कुरिरहेका थिए । किनमेल गर्ने कम भए पनि ओहोरदोहोर गर्ने टन्नै देखिन्थे । साँघुरो गल्लीमा आपसमा ठोक्किँदै बढिरहेका थिए । ‘हाम्रो ठाउँ नै साँघुरो छ’, उनले भने, ‘बाटो पनि सानो छ । हामीलाई दूरी कायम गर्न एकदम मुस्किल छ । पसलमा किनमेल गर्न आउनेहरू पनि सचेत भइदिए कम जोखिम हुन्थ्यो ।’
असन, इन्द्रचोक, न्युरोडलगायत ठाउँमा पुरानै अवस्था जस्तो मानिसको चाप देखिन थालेको छ । सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलोे बनाएसँगै उपत्यकाका प्रायः पसल खुल्न थालेका छन् । केही दिनयता असनका कपडा, भाँडाकुँडा, गहना, खुद्रालगायत सबै पसल खुलेका छन् । कामदार पनि आउन थालेका छन् । भारी बोक्ने मजदुर पनि पसलका सामान ओसार्ने कामको खोजीमा हिँडिरहेका देखिए ।
सडकमा हिँड्नेको चाप पनि बढेको देखियो । किनमेलमा आउनेभन्दा हिँडडुल गर्ने धेरै भएको पसले बताउँछन् । ‘चहलपहल त बढ्यो’, व्यापारी सोमनाथ तिवारीले भने, ‘तर, किनमेल गर्ने कम छन् । अन्य हिँडडुल गर्नेकै भीडभाड छ ।’
अधिकांशले मास्क नलगाएको, दूरी कायम नगरेको देख्दा लाग्थ्यो– अब कोरोनाले केही गर्दैन । कोही सहजै पसलमा भित्र छिरेर (दूरी कायम नगरी) सामान सोधखोज गरिरहेका थिए । केही साथीहरूसँग पुरानै अवस्थामा जस्तो अँगालो हालेर हिँडिरहेका थिए । अधिकांश पसले पनि असुरक्षित अवस्थामा थिए । ग्राहकलाई निश्चित दूरीमा राख्ने व्यवस्था छैन । पसलेले पनि मास्कलगायत सुरक्षाका उपाय अपनाएको देखिएन ।
बढ्दो असुरक्षित भीडलाई जनस्वास्थ्यविद्ले चिन्ताका रूपमा लिएका छन् । राजधानीका साँघुरा ठाउँमा धेरै भीडभाड हुनु जोखिमपूर्ण भएको जनस्वाथ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले बताए । उनका अनुसार यस्ता ठाउँमा दूरी र मास्कको एकदम जरुरी हुन्छ ।
लकडाउन खुकुलिएको त हो । तर, स्वास्थ्य सुरक्षा आफ्नै लागि हो । त्यसलाई वास्ता नगरी हिँड्दा ठूलो समूहलाई संक्रमणको जोखिम हुने डा. दीक्षितको सुझाव छ । ‘लकडाउन खुलाउनै पर्ने थियो । ठीकै हो’, उनले भने, ‘तर, मास्क नलगाई हिँड्नु, दूरी कायम नगर्नु नागरिकको गैरजिम्मेवारीपन हो । यस्तो व्यवहारले सबैलाई असुरक्षित बनाउँछ ।’
राज्यले पनि यस्ता ठाउँमा निगरानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अरू बेला डन्डा बर्साउने प्रहरीले अहिले मान्छेको ज्यान बचाउन भीडभाड हुने ठाउँमा दूरी राख्न सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नियम पालना गराएर बजार खुलाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट